၂၀၂၁ ဧပြီလအတွင်း Viki မှာ လူကြည့်အများဆုံး ကိုရီးယား Drama ဇာတ်ကားကောင်း ၄ ကား | News Bar Myanmar
Categories: Celebrity NewsKorean Celebrity
၂၀၂၁ ဧပြီလအတွင်း Viki မှာ လူကြည့်အများဆုံး ကိုရီးယား Drama ဇာတ်ကားကောင်း ၄ ကား
ဧပြီလဟာ မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်းမှာပဲ ကုန်​ဆုံး​တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြီလအတွင်းမှာ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲ​ကောင်း​တွေ များစွာ ပြသခဲ့ပြီး အဲ့ထဲကတစ်ချို့ကိုလည်း နှုတ်ဆက်ခွဲခွာခဲ့ကြပါတယ်။ အခု ​ဖော်ပြ​ပေးသွားမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲ ၄ ခုက​တော့ ဧပြီလအတွင်း Viki မှာ လူကြိုက်များပြီး ကြည့်ရှုသူအများဆုံးဖြစ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
1. River Where the Moon Rises
“River Where the Moon Rises” ဇာတ်လမ်းတွဲဟာဆိုရင်​ ဂို​လျော​ခေတ်က Pyeonggang (Kim So Hyun) နဲ့ On Dal (Na In Woo) တို့ရဲ့ ဒဏ္ဍာရီလာ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို ​ဖော်ကျူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီးတစ်ပါးအဖြစ် ​မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ Pyeonggang ဟာ လုပ်ကြံသူ Yeom Ga Jin တစ်ဖြစ်လဲ ဘဝကို ရှင်သန်​နေထိုင်ပြီး ဂို​လျောကို ဦး​ဆောင်နိုင်မယ့် ပထမဆုံး ဘုရင်မတစ်ပါးဖြစ်လာဖို့ အိပ်မက်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။
On Dal က​တော့ နူးညံ့ဖြူစင်တဲ့ ​ယောကျ်ားတစ်​ယောက်ဖြစ်ပြီး Pyeonggang ကို ချစ်မြတ်နိုးကာ သူမကို ကာကွယ်ဖို့ဆို ဘာမဆိုလုပ်မယ့်လူတစ်​ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာဆိုရင် Pyeonggang နဲ့ On Dal တို့ရဲ့ ဖြူစင်တဲ့ ချစ်ခြင်း​​တရားနဲ့ နိုင်ငံ​တော်ကို ပြန်လည်ထွန်း​တောက်လာ​အောင် ပြုလုပ်မယ့် မင်းသမီးရဲ့ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ ဘဝခရီးကို ခံစားကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
2 . Mouse
“Mouse” ဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်က “Vagabond” ဇာတ်လမ်းတွဲအပြီး Lee Seung Gi ပထမဆုံး ပြန်လည်သစုပ်​ဆောင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ဝင်စားမှု​တွေ မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ လှို့ဝှက်သည်းဖိုဇာတ်ကား​ကောင်းဖြစ်တဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာဆိုရင် အပြစ်ကင်းပြီး ​ဖြောင့်မတ်တဲ့ Jung Ba Reum (Lee Seung Gi) ဆိုတဲ့ ရဲသား​လေးနဲ့ သူ့ရဲ့ မိဘ​တွေကို သတ်သွားတဲ့ ကွင်းဆက်လူသတ်သမားကို လက်စား​ချေဖို့သာ စိတ်ထဲရှိတဲ့ စုံ​ထောက် Go Moo Chi (Lee Hee Joon) တို့ရဲ့ အ​ကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ ၂ ဦး​ပေါင်းပြီး ဆိုက်ကို ကွင်းဆက်လူသတ်သမား​တွေကို ဘယ်လို​ခြေရာခံ​ဖော်ထုတ်မလဲ၊ ဆိုက်ကိုလက္ခဏာ​တွေဟာ ဘယ်ကစတင်လဲဆိုတာကို ဘယ်လို​လေ့လာဆန်းစစ်အ​ဖြေထုတ်သွားမလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
3. Beyond Evil
“Beyond Evil” ဟာဆိုရင်လည်း မင်းသား Yeo Jin Goo နဲ့ မင်းသား Shin Ha Kyun တို့ ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ထားတဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖို ဆိုက်ကိုကားဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ၂ ဦးဟာ ကွင်းဆက်လူသတ်သမားကို ဖမ်းမိဖို့ ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်း​တွေကို လိုက်နာ​နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချိန်က ထက်မြက်တဲ့ စံပြရဲသားတစ်​ယောက်ဖြစ်တဲ့ Lee Dong Shik ဟာ သူ့ဘဝကို တစ်ဆစ်ချိုး ​ပြောင်းလဲ​စေမယ့် ကွင်းဆက်လူသတ်မှုနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး နှစ် ၂၀ ကြာတဲ့အခါ ရဲစခန်း​သေး​သေးလေးတစ်ခုမှာ ​​သေး​သေးမွှားမွှားအလုပ်​လေး​တွေကိုသာ လုပ်​ဆောင်ရင်း လူမသိသူမသိ ဘဝကို ဖြတ်သန်း​နေသူဖြစ်ပါတယ်။
ထို့​​နောက် ငယ်ရွယ်ပြီး ​အောင်မြင်ခါစ စုံ​ထောက် Han Joo Won (Yeo Jin Goo) ဆိုသူက လှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု​ကြောင့် ထိုရဲစခန်းကို ​ရောက်လာပြီး နှစ် ၂၀ ​ကျော်မှ တစ်​ကျော့ပြန်ဖြစ်လာတဲ့ ကွင်းဆက်လူသတ်မှုကို သူတို့ ၂ ​ယောက် ​ပူး​ပေါင်းပြီး ဘယ်လို​ဖော်ထုတ်သွားကြမလဲဆိုတာကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
4. Sell Your Haunted House
“Sell Your Haunted House” ဟာဆိုရင် ရိုမန့်စ်၊ ဝိဉာဉ်​လောက၊ အိမ်ခြံ​မြေ​ရောင်းဝယ်​ရေး​လောကနဲ့ ဟာသစတဲ့ ရသ​တွေကို ​ရော​နှောပြီး ဇာတ်ကားတစ်ကားထဲမှာ ပုံ​ဖော်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကဇာတ်​ကောင် ၂ ဦးလုံးဟာ စိတ်စွမ်းအားရှိတယ်လို့ သိထားကြ​ပေမဲ့ တစ်ဦးက​တော့ လိမ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသမီး Jang Nara က ​ဒေါသကြီးပြီး စိတ်စွမ်းအားရှိတဲ့ Daebak အိမ်ခြံ​မြေလုပ်ငန်းရဲ့ ပိုင်ရှင် Hong Ji Ah အဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။ CNBLUE အဖွဲ့ဝင် Jung Yong Hwa က​တော့ ဝိဉာဉ်တွေကို အယုံအကြည်မရှိ​ပေမဲ့ ​ဝမ်း​ရေးအတွက် စိတ်စွမ်းအားရှိပြီး မ​ကောင်းဆိုးဝါးတွေကို နှိမ်နင်းနိုင်တယ်လို့ ပြောဆိုလိမ်ညာ​နေတဲ့ လူလိမ် Oh In Bum ​နေရာက ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့ ၂ ​ယောက် ပူး​ပေါင်းပြီး ဝိဉာဉ်စွဲကပ်​နေလို့ ​ရောင်းမထွက်တဲ့ အ​ဆောက်အအုံတွေကို သွား​ရောက်ကာ မ​ကောင်းဆိုးဝါး​တွေကို နှိမ်နင်းပြီး ထိုအ​ဆောက်အ​အုံ​တွေကို ​ပေါက်​စျေးနဲ့ ​ရောင်းနိုင်ဖို့ အတူလုပ်​ဆောင်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
Written : ZL
Next စစ်ထဲမဝင်ခင် ပရိသတ်တွေအတွက် Special Event လေး လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ EXO’s Baekhyun »
Previous « စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး​နောက် ကိုယ့်လမ်းကိုယ်​လျှောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတဲ့ IZ*ONE အဖွဲ့ဝင်များ
Tags: K-Drama Update
ကြေငြာတစ်ခုရဲ့ ရိုက်ကွင်းမှာ အချစ်စမ်းခဲ့ကြတဲ့ Rain နဲ့ Kim Tae Hee
ယခုနှစ် ​မေလအတွင်း ​တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ဂုဏ်သတင်းအ​ကျော်ကြားဆုံး K-Pop ​​ယောကျ်ား​လေးအဖွဲ့များ
Album အသစ်ထွက်ရှိဖို့ကြိုးစားခဲ့ရပုံနှင့် Lay ရဲ့ လတ်တလော အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများ